Iran: “Manoatra Noho Ny Tantara Foronina” Izany Fikasana Hamono ny Ambasadaoro Saodiana Izany · Global Voices teny Malagasy
Iran: “Manoatra Noho Ny Tantara Foronina” Izany Fikasana Hamono ny Ambasadaoro Saodiana Izany
Voadika ny 15 Oktobra 2011 16:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Nahasarika ny takelaka voalohany amin'ny vohikala sy ny Gazety Manerantany ny Fiampangana ny Iraniana ho mikasa hamono ny Ambasadaoron'i Arabia Saodita any Etazonia. Nanambara ny fiampangana Iraniana roa nanakarama izay heveriny ho avy amin'ny andian-jiolahy meksikana hamono ny Ambasadaoro Saodiana Departemantam-panjakana Amerikana misahana ny Fitsarana. Mitsipaka izany fiampangana izany i Iran. Misara-kevitra mandrakariva amin'ity tantara “manoatra noho ny tantara foronina” ity ny hevitry ny mpamaham-bolongana Iraniana.
Nilaza i Faryad 22 Khordad [fa]:
Milaza ny fiampangan'ny Amerikana an'i Iran ho diso sy foroporonina fotsiny ny sasany ao amin'ny Balatarin [vohikala iraniana fifampizarana rohy malaza]. Mety hiteny ny manampahaizana manokana vahiny fa foroporonina ny fiampangana satria tsy fantany tsara ny momba ny mpitondra ao Iran. Fa izahay Iraniana no mahalala izay mitondra ny firenena, tsy manana ny anjara toerany aty izany hevitra sy zavatra mitombina izany… Te-hampiseho ry zareo fa afa-manakorontana any Etazonia.
Manoratra i Azadi o Abadi [fa]:
Indraindray dia sarotra tena sarotra ny manoratra saingy io no zavatra farany azontsika atao… Niteraka resabe ilay resaka fikasana ary miresaka ady ny mpanao politika amin'ny antoko ankavanana. Misy ny manampahaizana manokana miresaka ity tantara ity any amin'ny fampitam-baovao nefa tsy mahita ny misy azy akory ao amin'ny sarintany. Koa raha tsy mahita an'i Iran amin'ny sarintany akory aza izy ireo, fa ny baomba sy balafomanga izany mety ho… Amin'ny maha olom-pirenena eto Iran ahy, tsy mahasoa na iza na iza na ny ady na ny fananiham-bohitra an'i Iran. Na ho an'ny Iraniana izany na ho an'ny hafa manerana izao tontolo izao.
Nampian'ny mpamaham-bolongana fa izay [Iraniana] maniry ny hanafihana an'i Iran dia mpamadika.
Manoratra [fa] i Mosbate1000 [fa]::
Androany no 11 Septambra ho an'i Iran ary nanapa-kevitra ny hifanandrina amin'ny Repoblika Islamika ihany i Etazonia… Rehefa ny reformista no teo amin'ny fahefana, nandefa hafatra manerana an'izao tontolo izao ry zareo fa azo zakaina ny fitondrana ao aminy fa rehefa nahazo ny fitondrana kosa i Mahmoud Ahmadinejad, tapitra hatreo ilay fizakana… Na ho ela na ho haingana, hiara-hahita ny fidabohan'ny herisetran'i Iran sy ny fitondrana mpanao kolikoly isika.
Shoorezar manoratra [fa]
Mitovitovy amin'ny sarimihetsik'i Hollywood ilay fiokoana fa tsy amin'ny zavamisy… Efa namoritra ny olompireneny ny fitondrana Iraniana, efa nanomana fanafihan'ny mpampihorohoro, saingy tsy mifanaraka amin'ny zavamisy ny singa milaza ny tantaran'ilay fiokoana… Tsy niditra amina asam-pampihorohoroana tsy ahazoan'izy ireo tombontsoa izany taloha i Iran.
Arjensan manoratra tamin'eso hoe tokony hisy tahaka izao ny dokambarotra any Iran: “Mitady mpizahatany Amerikana vitsivitsy izahay hanao fiaikena ho manao asam-pitsikilovana”